> Resource> Android> Top ise Android Photo-ahazi
N'ihi na a ọtụtụ n'ime ọrụ, na-ahazi photos bụ ihe kasị egbu mgbu ọrụ. On gam akporo ngwaọrụ, ị nwere ike mfe weghara imerime oyiyi ekele na nnukwu ohere awa site smart SD kaadị. Otú ọ dị, ọ bụrụ na ị arụnyere a pụrụ ịdabere na Android foto Ọhazi ngwa, ọ ga-esi ike ka ị na-esochi nke data. Ke ibuotikọ emi, m weere a ndepụta nke kasị mma foto Ọhazi ngwa maka Android.
3. HTC mmekọrịta Manager
Ndị a ngwa ndị otu nke kasị mma foto Ọhazi maka Android ntị na mbadamba ma na-akwado Android OS na mobile ngwaọrụ na niile nsụgharị nke Windows OS (XP, Vista, Win 7 na Win8) on desktop. HTC mmekọrịta Manager na Wondershare MobileGo for Android nkwado Mac OS dị ka mma. Faịlụ formats akwado bụ BMP, GIF, jpg na PNG. Ndị a ngwa hazie foto na atọ ọchichi ya bụ album, Atiya na mkpado.
1. AirDroid n'ụzọ nkịtị-agbanwe gị PC n'ime ihe Android foto Ọhazi
AirDroid ana achi achi wireless management gị Android site a web-nchọgharị na desktọọpụ bụrụhaala na ị na nwere otu Wi-Fi na netwọk. Na Android foto Ọhazi dị ka AirDroid ị na-adịghị mkpa iji ekwentị gị ihuenyo maka ị na-elele foto na ihe oyiyi na-agafere nọ n'ógbè gị na gị na PC site na Wi-Fi apostle atụmatụ. Mgbe echichi, Ị ga-anya site na mbara n'usoro nke njikwa na nke a na-eji ngwa awade. Ị nwere ike imeghe ọ bụla faịlụ ke iche iche window na a taabụ na aka nri n'akụkụ ga-enye a mkpirikpi profaịlụ nke nchekwa kpuchie na foto na mgbasa ozi faịlụ. Isi ihuenyo bụ dị ka omenala na desktọọpụ na ị nwere ike mgbe niile dezie, akpali, Dọrọ na dobe, òkè na hazie foto mgbe na laa.
Wide nso nke foto customizing nhọrọ.
Great User Interface on Web na gam akporo ngwaọrụ.
Ngwaọrụ Foto dị kenha ọrụ bụghị e ẹkenam ma.
Kwado otu Wi-Fi netwọk njikọ na gị android ngwaọrụ na PC.
Ekwentị gị ga-ike jikọọ a PC site a ọkọlọtọ nchọgharị na weebụ.
Abanye na web.airdroid.com ma nọrọ ná nchebe njikọ gị site na-enye paswọọdụ.
Ugbu a, i nwere ike mfe tinye ma ọ bụ hichapụ na hazie foto gị.
2. Mobisynapse bụ a multitasking foto Ọhazi maka Android
Mobisynapse na-eme ka n'ịhazi na exporting data site na android ngwaọrụ ka PC nnọọ mfe ma n'ụzọ kwụ ọtọ. Ị nwere ike ijikọ na ngwaọrụ gị site USB ma ọ bụ Wi-Fi na ọ ga-jikọọ na Android ekwentị gị na desktọọpụ. Iji jiri Mobisynapse dị ka a foto Ọhazi maka Android ị ga-enyere ndị "Debugging" mode na ngwaọrụ gị. Nhọrọ a dị na ntọala-Ngwa-Development buttons. Mgbe nbudata na na na wụnye, ị ga-ahụ a na windo na a foto button n'elu. Ọ ga-enye dị iche iche atụmatụ maka ahazi foto site na cropping / edezi ka nkekọrịta na Ihichapụ. Niile ozi banyere SD kaadị ebe nchekwa ojiji na faịlụ na ụdị nke foto a ga-emere na nri akuku. Ị nwere ike mfe mmekọrịta gị niile foto ugbu na gị android ngwaọrụ Outlook na Mobisynapse, ma nke a ngwa chọrọ Outlook 2007 ma ọ bụ a elu version.
Na-enye dịgasị iche iche nke ọrụ maka ijikwa photos.
Enweghị nsogbu na-arụ ọrụ n'etiti Android ngwaọrụ na Desktọpụ
Na ya ikpe version, na akpaaka-mmekọrịta ọrụ n'etiti Android na PC site ma USB na Wi-Fi na-nkwarụ.
Abanye na Mobisynapse, ga-esi ụghalaahia na ibudata na free version.
Jiri eriri USB ma ọ Wi-Fi jikọọ ekwentị gị na PC gị.
Open Mobisynapse na gị Android n'ụlọ ihuenyo.
Pịa na Files akara ngosi.
Abụọ na ngalaba nke faịlụ ga-apụta. Nri onye ga-egosi SD kaadị ebe nchekwa photos na n'aka ekpe ga-depụta nchekwa na na PC.
Export, tinye ma ọ bụ hichapụ oyiyi.
3. Hazie photos na android na dezie ha na HTC mmekọrịta Manager
HTC mmekọrịta Manager bụ a free ngwa kere nanị jikwaa photos na site na HTC handset na PC na Anglịkan. Ị nwere ike mfe jikọọ gị HTC handset nke ụdị ọ bụla gị na PC site na iji ngwa. Ọ na-akwado ma Windows na Mac ịwa usoro. HTC mmekọrịta Manager emepụta a ndabere nchekwa nke gị niile foto kwa, nke mere na onye ọ bụla nke gị faịlụ na-efu. Synching na ijikwa photos dị mfe na HTC mmekọrịta Manager. Ihe niile ị na-eme bụ a pịa oyiyi na ọ ga-akpaghị aka-akpali gị na a dịgasị iche iche nke nhọrọ. Easiness bụ otu a njikwa na-ebufe foto gị Android ngwaọrụ site na kọmputa, ị naanị iji họrọ foto na-ezite ha niile site na ịpị "Zitere ekwentị." Ịnwere ike ịnyefe photos mfe site na iPhone ma ọ bụ iTunes ka HTC ngwaọrụ kwa.
Nnọọ mfe idetuo foto site na HTC Android ngwaọrụ ka na kọmputa.
Mfe dezie, jikwaa, ụlọ ahịa, ike ndabere ma na-eso ọtụtụ puku foto.
Mbiputegharị nke oyiyi bụ a mgbe nile na omume.
Nanị na-akwado HTC ngwaọrụ.
Agbasaghị akwụsịlata mgbe syncing photos n'etiti iPhoto na Mac.
Wụnye HTC mmekọrịta Manager ngwa na ngwaọrụ gị.
Jikọọ na ngwaọrụ gị ka PC eji eriri USB.
Na Setting taabụ ị ga-ahụ a mmekọrịta button, pịa ya jikọọ ekwentị na PC.
The Gallery taabụ nwere ọtụtụ kemfe atụmatụ dị ka n'Ubi Photo na Dezie Photo, ị nwere ike ahu nagide ha.
4. Mobogenie bụ a pụrụ ịdabere Android foto Ọhazi
Mobogenie bụ ihe ngwa maka ijikwa Android ngwaọrụ site na kọmputa. Ọ na-kwajuru na a mma Android foto Ọhazi mma ma ọ bụrụ tụnyere ndị ọzọ ngwa. Na nanị otu click na ekwentị m taabụ, Ọ na ejikọ na syncs gị niile foto gị na desktọọpụ. Ọ bụrụ na ị ihichapụ a foto n'amaghị ama, na a ga-nkwado ndabere na mpaghara weghachite atụmatụ njikere ịrụ ụka a nke. Mobogenie bụghị nanị ezi Android foto Ọhazi kamakwa otu nnukwu ngwaọrụ hapụụrụ ngwá ọrụ.
Ọ bụ Free.
Mfe na reliably emepụta a ndabere gị Android ngwaọrụ.
Na-akwado ọtụtụ dị ukwuu nke Android ngwaọrụ tinyere Samsung, LG na Motorola na HTC.
Unappealing User Interface n'ihi na ọ na ọrụ na Emechiela Beta.
Jiri eriri USB jikọọ na ngwaọrụ na a PC.
Ngwa ga-akpaghị aka ịchọpụta photos gallery.
Kwado eriri debugging mode enyere na Mmepụta taabụ.
Họrọ My ekwentị taabụ maka ijikwa foto.
5. Wondershare MobileGo for Android bụ maa a ndụ nchekwa
Wondershare MobileGo for Android Ma ọ bụ Wondershare MobileGo for Android Pro (Mac) bụ nanị ngwá ọrụ na-enyere syncing n'etiti gị na PC na Android ngwaọrụ na-elekọta exporting ma ọ bụ importing nke foto mfe. Nke a ngwa ike ịhazi Android photos site na kọmputa mfe. Ị nwere ike iji ya dị ka a zuru okè Android foto Ọhazi, ịhazi foto niile na ị weghara, download na gị Android ekwentị netwọk, ma ọ bụ ị ga-esi mgbe ị na-egwu ụfọdụ Android APK faịlụ. Ọzọkwa, ọ na-ahapụ gị weghara ọ bụla na ihuenyo, dị ka na ihuenyo mgbe ị na-akpọ a egwuregwu ma ọ bụ a nkiri na gị android ngwaọrụ.
Smart User Interface na mfe igodo.
Mmekọrịta ihe karịrị 2000 iche iche na ngwaọrụ na kọmputa.
Pushes photos na site na ihe gam akporo ngwaọrụ mfe.
USB backups bụ ngwa ngwa karịa Wi-Fi.
Na-adịghị na-akpaghị aka syncs foto site na Outlook.
Download Wondershare MobileGo for Android na-agba ya na kọmputa.
Jikọọ na ngwaọrụ gị ka PC site na eriri USB ma ọ bụ Wi-Fi.
Mgbe ịchọputa ngwaọrụ gị a menu ga-egosi na n'aka ekpe n'akụkụ.
Họrọ Photos taabụ.
Ị nwere ike ijikwa photos mfe na ọtụtụ nhọrọ dị ka Export, Tinye na Hichapụ, wdg